Apple Music, ny fiandohan'ny farany ho an'ny Store Storeuneune? | Avy amin'ny mac aho
Izay mpampiasa manaja tena dia hiatrika olana lehibe ankehitriny. Miaraka amin'ny famoahana ny Apple Music tamin'ny herinandro lasa teo dia manana serivisy telo samy hafa be izahay izay tsy maintsy safidin'ny mpampiasa. Amin'izao fotoana izao dia azontsika atao ny mividy mozika ao amin'ny iTunes Store, afaka manana famandrihana amin'ny Apple Music ary afaka manana famandrihana amin'ny iTunes Match ihany koa izahay.
Fomba telo samihafa hihainoana mozika ao anatin'ny ekosistra Apple. Mazava fa ny serivisy iTunes Match dia mifantoka amin'ny fananana ny mozika rehetra ao amin'ny rahona iCloud, na dia te hitahiry azy amin'ny rahona aza ianao dia afaka manakarama fitehirizana 20 GB iCloud amin'ny $ 0,99 isam-bolana. Ankehitriny, ny serivisy izay iTunes Store y Hafa mihitsy ny Apple Music ary tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra ny mpampiasa.
Andao hanomboka hiresaka momba ny iTunes Store. Io no serivisy nahatonga an'i Apple sy ny iPods nitaingina ny onja farany tamin'ny 2001, rehefa lasa lamaody ho an'ireo mpampiasa ny tsy nividy afa-tsy ireo hira nahaliana azy ireo tamin'ny vidiny kely iray dolara. Vetivety dia tsy maintsy niova ny indostrian'ny mozika ary nitotongana ny asan'ny fivarotana kapila ara-batana.
Toa te handray anjara vaovao indray ny raharaha ary izao dia ny serivisy fandefasana feo no mifehy. Fantatr'i Apple izany ary amin'ny alàlan'ny fanombohana ny Apple Music dia mitantana ny famonjena ireo mpampiasa an'arivony izay tao amin'ny serivisy Spotify Premium. Saingy, mipetraka ny fanontaniana napetrakay taminao tao amin'ny lohatenin'ity lahatsoratra ity. Apple Music ve no ho fiandohan'ny farany amin'ny iTunes Store? Tian'ireo mpampiasa ve ny hanana ny mozikany rehetra amin'ny € 9,99 isam-bolana na mividy ny mozikany mandrakizay?
Raha ny angom-baovao natao tamin'ny telovolana farany tany Etazonia, nihena 10,4% ny fampidinana mozika niomerika ary nihena ny varotra rakikira 4% 116 tapitrisa no namidy ireo rakikira. Ankehitriny, raha jerena ny isan'ny hira alefa amin'ny serivisy mivantana, dia mihoatra ny 135.000 tapitrisa ny angon-drakitra, izay manolotra izany Ny kolontsaina mividy-to-save dia soloina amin'ny fihainoana izay rehetra tianao famandrihana.
Ho hitantsika raha misy fiantraikany lehibe amin'ny iTunes Store ny famoahana ny Apple Music, na dia an'ny Apple aza, inona no mahasamihafa azy raha mividy ilay hira izy ireo na mandoa ny famandrihana? Mbola ao an-trano ny vola.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Music » Apple Music, ny fiandohan'ny farany ho an'ny Store Storeuneune?
Phenomenal, ny farany avy amin'ny Eminem manokana amin'ny Apple Music